Noocyo oo ah jeeriga macaan ee gobolka Moscow | December 2019
Ugu Weyn Ee Noocyo oo ah jeeriga macaan ee gobolka Moscow
Fasalada ugu fiican ee jeeriga ee gobolka Moscow
Wadamo badan oo yurub ah, erayada "cherry" iyo "cherry macaan" ayaa loo tarjumay si la mid ah. Oo wax sidaas u weyni kuma jiro, maxaa yeelay, waxay isku ila mid yihiin. Xitaa xitaa isku xirnaanta noocan ah ee u dhaxeeya dhaqamada ma awoodaan in ay u beddelaan jeeriga dufanka galay jeeriga macaan. Cherry Sweet waxaa laga arki karaa ma bannaanka oo dhan on bannaankooda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo oo ah jeeriga macaan ee gobolka Moscow 2019